Fanohanana ny ankizy: ny fe-potoana fandoavam-bola § fisaraham-PANAMBADIANA
Ao ny raharaha ny fisarahana sy ny fisaraham-panambadiana bebe kokoa ny fandoavana adidy amin’ny mpiara-miasa teo aloha, izay afaka ihany koa ho eo ny ara-dalàna ny fisaraham-panambadiana dia manan-kery.
Raha oharina amin’ny vady sy ny zanaka, ny fikojakojana adidy dia ny ankamaroan ny fotoana. Eto, ny teny hoe»alimony koa no hita matetika».
Fa inona marina no alimony
Ary mandra-pahoviana izay tokony aloa aminy. Ny teny hoe Alimony dia midika hoe»sakafo»na ny»fikolokoloana ny fandoavam-bola». Izy no manondro mazava tsara fa mba soa, izay tsy homena ny sahirana, dia ny tenany afaka handrakotra ny zavatra ilaina eo amin’ny fiainana. Ao amin’ny mivelatra heviny, dia afaka ny ho toy izany tamin’ny vadinao ho maharitra. Ny mpitrosa tsy maintsy mandoa alimony ny ankizy, fara faharatsiny, ampahany amin’ny taona amin’ny anaran’ny ny fanaraha-maso ny ray aman-dreny. Izany dia atao ao ny Endriky ny Vola fikojakojana.
Kanefa ohatrinona no alimony
Ny habetsahan’ny alimony avy amin’ny latabatra.
Izany no azo atao mba voafetra ihany
Ny kajikajy alimony, ny Düsseldorfer latabatra no ampiasaina any Alemaina toy ny teboka manan-danja ny boky. Ny fototry ny fidiram-bola ny Ny fikojakojana mpitrosa (ho feno taona ny ray aman-dreny) ary ny taona ny atsasaky ny ankizy, ny fototra ilaina ny famakiana, ny zon’ny ankizy eo isam-bolana fototra izany. Ny Düsseldorfer latabatra no tsy ara-dalàna manan-kery, na izany aza manompo ho toy ny tsara ny fironana, hevitra, ary matetika dia ampiharina amin’ny alalan’ny ny fitsarana, raha manao kajy alimony sy ny fitsarana dia nametraka. Ny haavony dia toy izany hatrany arakaraka ny fidiram-bola ny toe-javatra amin’ny ray aman-dreny sy ny taona ny sahirana sy miankin-doha ankizy, ary mety ho ao amin’ny olona tsirairay raharaha isan-karazany. Ao ny raharaha ny olon-dehibe ny ankizy, ny ohatry ny roa miankina ray aman-dreny dia tapa-kevitra ny olona ny fidiram-bola momba ny fidiram-bola tanteraka ny roa tonta. Izay mahazo kokoa, mandray anjara bebe kokoa ny anjara ao amin’ny fandoavam-bola ny alimony. Ny isan-jato eo ambany fidiram-bola mampidi-bola dia correspondingly ambany. Ny tanora ny fiahiana ny birao dia afaka manao kajy ny alimony ihany koa, ary toy izany fotsiny eo ambany ny ray aman-dreny. Ny andrim-panjakana mifototra amin’ny ny fanapahan-kevitra ny habetsahan’ny alimony amin’ny düsseldorf latabatra. Ny zaza fikolokoloana ny ankizy zo hahazo fanohanana ny ankizy no tsy farany amin’ny taona maro an’isa. Amin’ny Ankapobeny, ny zo Fikojakojana mitoetra ao an-toerana avy eo dia ray aman-dreny roa, fara fahakeliny, mandra-vita ny voalohany sy ny fanofanana arak’asa na maripahaizana, mazava ho azy. Izany ihany rehefa afaka izany, dia azo ny mihevitra fa ny ankizy dia afaka mba hahazoana fivelomana. Izany dia mitondra tena amin’ny fomba hafa raha toa ka ny teny dia mifandray amin’ny mivelatra dikany, koa ny vadinao. Eto, ny manavaka ny fisarahana fikojakojana, sy ny Nisara-panambadiana ny fikojakojana. Mandra-pahoviana no tsy handoa fanohanana ny ankizy. Ny milaza fa ny fisarahana fikojakojana dia, amin ‘ny fitsipika, noho ny faharetan’ ny fisarahan’ny roa mpivady, na voasoratra ara-panjakana ny fiainana mpiara-miasa mandra-pahatongan’ny andro mialoha ny fisaraham-panambadiana. Tamin’ny taona voalohany nanjakan’i ny fisarahan-monina alimony, koa tsy dia Purchase adidy eo amin’ny ampahany ny Mpitory. Izany dia midika hoe: iray, fara Fahakeliny, ny taona, ny tompon-trosa dia tsy azo terena, amin’ny antonony ny asa mba hanaraka mba hitsena ny fiainana fepetra tsy miankina, ary mba hanamaivanana ny mpitrosa. Izany no marina ihany koa fa ny post-panambadiana ny fikojakojana. Na izany aza, afa-tsy raha toa ny fahazoana adidy eo amin’ny faritry ny mpitory. Na ahoana na ahoana, ny fividianana adidy dia esorina rehefa ny fikarakarana ny sahirana, raha toa ka milaza ny alimony avy amin’ny fahasembanana na ny fikarakarana ny zaza kely. Ao ny raharaha ny kilema, ny fandoavam-bola maintsy mitoetra ao an-toerana matetika mandra-ny mpandray afaka hiverina hiasa. Amin’ity tranga ity mitranga ohatra noho ny aretina mitaiza, na avo ny taona, afaka manana ny milaza alimony ny fotoana ela, mandra-maty ny mpitrosa
Orinasa insolvency - Ny raharaham-barotra, vavahadin-tserasera momba ny lohahevitra insolvency